QM oo U Baahan $300 Milyan oo Dheeraad Ah Si Abaaraha Dalka Ka Jiro Loo Cirib Tiro - Jazeera FM
QM oo U Baahan $300 Milyan oo Dheeraad Ah Si Abaaraha Dalka Ka Jiro Loo Cirib Tiro
June 22, 2017 admin featured
Madaxada hay’adda Qaramada Midoobeey u qaabilsan Cunnada Adduunka (WFP), Laurent Bukera ayaa sheegay in QM ay u baahantahay lacag dhan $300 milyan oo dheeraad ah si loo ciribtiro cunno yarida iyo gaajada waqti xaadirkan ka jirta Soomaaliya.
“Waqti xaadirkan waxaan u baahanahay ku dhawaad $300 milyan Lixda bilood ee soo socota” ayuu yiri, waxuuna sii raaciyay “haddii aynaan helinna waxaan gargaar u waayi doonnaa 2.5 milyan qof oo ay kamid yihiin 1 milyan oo caruur, haween uur leh iyo kuwa ilmo nuujinaya”.
Bukera ayaa sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan dadaalada ay Soomaaliya ka wadaa illaa iyo ay ka waayaan calaamadaha abaarta.
Madaxa WFP-Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in 700,000 qof ay ka barakaceen guryahooda iyaga oo raadinaya cunno iyo biyo, iyo in kumaanaan xoolo ah ay u dhinteen biyo iyo cows (cagaar) la’aan. “in ka badan 600 oo qof ayaa u dhimatay cudurka daacuunka” ayuu yiri Laurent Bukera.
Si kasta oo ay tahayba Bukera ayaa aaminsan in hay’adaha gargaarka ay dadaaleen marka loo barbardhigo abaartii 2011 oo 250,000 qof ay cunno la’aan u geeriyoodeen.
← Shirkada Air Arabia oo shaacisay inay duulimaadyo cusub ay ka bilaabayso Somaliland
Sacuudiga oo Tarxiilay 12,000 Neef oo Geel & Ari Isugu Jira oo Qatar Laga Leeyahay →